Soosaarayaasha Soo Saarayaasha - Shirkadaha Shiinaha Soo Saaraya & Warshadaha
Xaashi sariiraha oo tayo sare leh oo leh boqolkiiba 100% suuf
Waxaan nahay soo saare xirfadle ah oo leh laba wershadood, kuwaas oo si dhakhso leh oo hufan u soo saari kara suufka saafiga ah ee saafiga ah ee guriga, kaas oo loo habeyn karo hadba baahida loo qabo. Haddii aad ku iibsato tiro aad u tiro badan, waad nala soo xiriiri kartaa si aan u helno qiimayaal hordhac ah
Waxaan nahay soo saare xirfadle ah oo leh laba wershadood, kuwaas oo si dhakhso leh oo hufan u soo saari kara gogosha suufka ee saafiga ah, iyo Barkimadda oo loo habeyn karo hadba baahida loo qabo. Haddii aad iibsato tiro badan, waad nala soo xiriiri kartaa si aad u hesho qiimo jaban
Ku tuur Daboollada Caagga jilicsan ee Corduroy Kareemka Cabbitaanka Furuqa Wejiga Quruxsan ee Sofa Pillowcases
Waxaan nahay soo saare xirfadle ah oo leh laba wershadood, kuwaas oo si dhakhso leh oo hufan u soo saari kara go'yaal nadiif ah oo cudbi ah, oo loo habeyn karo hadba baahida loo qabo. Haddii aad iibsato tiro badan, waad nala soo xiriiri kartaa si aad u hesho qiimo jaban
Xaashidu waa mid jilicsan oo raaxo leh
Dumar 3 ah 1 jaakad roobaadka roog wata dharka jaakadaha biyaha ka celiya ee dharka OEM ah
Naagaha 3-in-1 jaakadaha dabaysha waa la hagaajin karaa si kor loogu qaado ilaalinta iyo raaxada. Waxay si fudud ula qabsan kartaa cimilada daran, sida ceeryaamo culus, roob ama baraf. Isboortiga barafka ah, barafka barafka, fuulista, socodka, safarka, ciyaaraha kale ee xilliga qaboobaha banaanka iyo munaasabado kaladuwan
Wershado xirfadleyaal dharka sare ah oo tayo sare leh haweenka
Dharkeena suufka haweenka tayo sare leh waa mid fudud, raaxo leh V-qoortiina waxay ku siinaysaa xoogaa meel aad ku neefsato. Waxay ku habboon tahay dharka dayrta, dharka dibedda iyo dharka gudaha. Waxay door ka ciyaari kartaa ilaalinta diirimaadka. Haddii aad iibsato tiro badan, si toos ah ayaad noola soo xiriiri kartaa si aad u hesho qiimaha ugu fiican.
Soo hel jaakadaha Dahabka ah ee Mens-ka dumarka ugu iibiya kuwa ugu wanaagsan.
Jaakaddeena WaMens Cotton JacketTo waxay ku siisaa badbaado iftiin iyo isku xirnaan leh, jaakad 100% ah oo cudbi ah ayaa loo baahan yahay inay gasho dharkaaga guga iyo deyrta. Baakada hore ee jiinyeerka ah waxay leedahay nashqad difaac sare leh, oo leh dabool aan la arki karin iyo jeebab badan. Jaakadani waxay leedahay noocayaga caadiga ah iyo nooca loogu talagalay
Baby rompers moodooyinka cusub ee INS ee Yurub iyo Ameerika waraaqaha dharka ilmaha gaagaaban
Waxaan ku leenahay laba saldhig oo wax soo saar oo ku yaal Huai'an. Waxaan u habeyn karnaa soo saarista dharka carruurta sida Baby rompers iyo kidsT-shirt. Waad nala soo xiriiri kartaa waqtiga si loo helo qorshaha lacagta ugu fiican
Sii dhar tayo sare leh oo Womens baaskiil wadista
Dharkeena Baaskiil wadista dumarka waxay leeyihiin mesh polyester ah si ay biyaha ugu daadiyaan, qalajinta degdega ah waxaa loo kala bixin karaa afar jiho iyo iftiin, neefsashadu waxay ka dhigi kartaa wadaha inuu dareemo raaxo, wuxuu ciyaari karaa xawaaraha ugu dhaqsaha badan, wuxuuna sii wadi karaa inuu ilaaliyo
Buugga ku habboon wuxuu noqon karaa bakteeriyada oo si fudud loo nadiifiyo
Mid kasta oo ka mid ah caruusaddayada cufan ee carruurta ah waxaa lagu sameeyaa 100% ultra-plush, dhinaca hore ee suufka dabiiciga u nuug badan, iyo dhabarka jilicsan ee maqaarka jilicsan. Qaab-dhismeedkan laba-lakab wuxuu bixiyaa raaxo hagaagsan iyo adeegsi waara.
Kabaha Jiilaalka Jiilaalka Caadiga ah ee WMen Jaakadaha Jaadka Sare ee Tayada Sare ah
Waxaan nahay warshad xirfad leh oo leh nidaam wax soo saar dhameystiran iyo naqshadeeyayaal xirfadlayaal ah. Jaakadaheenna hoose ee jaakadaha ayaa caan ku ah dibedda waxayna aqbalaan qaabab ama qaabab loo habeeyay. Jaakadaheena jajaban ayaa dabeysha iyo biyuhu aan biyuhu xirnayn, fadlan nala soo xiriir haddii aad wax shuruudo ah aad qabtid
Gabdhaha tayada sare leh waxay hoos geliyaan jaakad si ay u ahaadaan diiran oo qaro weyn
heens womens down jubbadda waa nooc heer sare ah oo kugu haleyn kara xilliga dayrta adiga oo aan kaa dhigayn wax culeys badan. Jaakaddan ilmada u adkeynaysa way fududahay in la daboolo waxayna u isticmaashaa dahaar gaagaaban si ay kuugu kululaato markaad dibadda joogto. Jaakadani way fududahay in la keydiyo, markaa waad diyaarin kartaa xitaa markaad socoto.